समाचार – Page 14 – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
२२ चैत्र २०७६, शनिबार २०:२५ English
सौराहामा हात्तीलाई बनभोज खुवाईयो १७ पुष २०७६, बिहीबार ०९:४८
प्रहरी र विप्लव समूहबीच दोहोरो फायरिङ १६ पुष २०७६, बुधबार २०:३८
सुर्खेत, १६ पौष । सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका–८ स्थित चेनेरीताल जङ्गलमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच दोहोरो फायरिङ भएको छ । विप्लव समूहका नेता बज्रबहादुर शाहीलाई पक्राउ गर्न गएको प्रहरी टोलीमाथि तीन राउण्ड फायर गरेपछि प्रहरीले पनि जवाफी फायरिङ गरेको..
वेल्डिङ गर्दा कारमा आगलागी
धादिङ, १६ पौष । वेल्डिङ गर्दा धादिङको मलेखुमा एउटा कारमा आगलागी भएको छ । मलेखुस्थित भद्रकाली मोटरसाइकल वर्कशपमा मर्मतपछि वेल्डिङ गर्ने क्रममा बा ६ च २१५५ नम्बरको कारमा आगलागी भएको हो । आगलागीबाट कार पूर्ण रुपमा जलेको छ । प्रहरी चौकी मलेखुबाट खटिएको प्रहरी र स्थानीयबासिन्दाले आगो..
स्मार्ट लाइसेन्स पनि नक्कली !
काठमाडौँ, १६ पौष । यातायात व्यवस्था विभागले प्रयोगमा ल्याएको स्मार्ट लाइसेन्स पनि नक्कली भेटिएको छ । नक्कली सवारी चालक अनुमति पत्र प्रयोग गर्नेहरु बढेपछि त्यसलाइ हटाउन विभागले स्मार्ट लाइसेन्स प्रयोगमा ल्याएको थियो । प्रहरीले नक्कली स्मार्ट सवारी चालक अनुमति पत्र भएका एक सवारी..
भ्रमण वर्षको उद्घाटन आज, यी स्थानमा सवारी आगमन प्रभावित
काठमाडौँ, १६ पौष । नेपाल भ्रमण वर्ष सन् २०२० को अवसरमा विभिन्न स्थानबाट निस्कने र्‍याली र भिभिआइपीको सवारीका कारण काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक अवस्था प्रभावित हुने भएको हो । काठमाडौँमा आज बुधबार दिउँसो २ बजेपछि सवारी आवागमन प्रभावित हुने भएको हो । ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले वैकल्पिक..
सीमा नाप्न कालापानी पुगेको टोलीलाई भारतीय पक्षले रोक्यो १५ पुष २०७६, मंगलवार १७:४७
काठमाडौँ, १५ पौष । सीमा नाप जाँच गर्न कालापानी पुगेको नेपाली टोलीलाई भारतले रोकेको छ । नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालमा विरोध भएको थियो । विरोध पश्चात नेपालले सीमा नाप जाँच गर्न सुरु गरेको थियो । मसिंर २७ गते सरकारले..
झापा, १५ पौष । जनवरी १ मा पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने पाँच विदेशी पाहुनालाई सम्मान गरिने भएको छ । मेचीनगर नगरपालिकाले नाकामा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी उनीहरुलाई सम्मान गर्ने भएको हो । नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने पर्यटकलाई नेपाली ढाकाटोपी, अबिर र मालाले सम्मान..
काठमाडौँ, १५ पौष । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले फेरि बर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको जनाएको छ । भारतको जम्मु–कश्मिर माथि रहेको पश्चिमी न्यून चापिय प्रणाली पूर्व सर्ने क्रममा रहेको र यो प्रणाली आज अबेर रातीसम्ममा नेपालको पश्चिमी भेगमा प्रवेश गर्ने विभागले जनाएको छ । विभागका..
बलात्कार आरोपी सिद्धबाबालाई धरौटीमा छोड्न आदेश १४ पुष २०७६, सोमबार १७:४५
सुनसरी, १४ पौष । बलात्कारको आरोपमा पक्राउ परेका सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीलाई अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । २ दिनसम्म चलेको थुनछेक बहसपछी सुनसरी जिल्ला अदालतले गिरीलाई ३ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएको हो । उनीमाथि आफ्नै अनुयायी महिलालाई बलात्कार गरेको आरोप..
निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, १४ पौष । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले भ्रमण वर्षका दिन दीपावली गर्न आग्रह गरेका छन् । भ्रमण वर्ष देशको प्रतिष्ठासँग जोडिएको भन्दै उनले उद्घाटनका दिन जनवरी १ तारिखमा दीपावली गर्न आग्रह गरेका हुन् । २० लाख पर्यटक भित्र्याउने..
चितवनबाट समातिए २ चिनियाँ नागरिक
काठमाडौँ, १४ पौष । प्रहरीले चितवनबाट २ जना चिनियाँ नागरिक पक्राउ गरेको छ । ह्याकरको आशंकामा चितवनबाट प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो । चितवन प्रहरीले भरतपुरको सिजी ल्याण्डमार्कस्थित होटल फेनमा शंकास्पद गतिविधिमा संलग्न रहेको पाईएपछि उनीहरुलाई केही दिनअघि पक्राउ गरेको..
काठमाडौँका यी स्थानमा ७ घण्टासम्म विद्युत आपूर्ति बन्द
काठमाडौँ, १४ पौष । आज काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा ७ घण्टासम्म विद्युत आपूर्ति बन्द हुने भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले महाराजगन्ज वितरण केन्द्र अन्तर्गत ११ केभी ओम फिडरबाट वितरित लाइनमा ७ घण्टासम्म बिद्युत आपूर्तिमा अवरोध हुने जनाएको छ । प्राधिकरणले बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५..
१० लाख मानिसको सहभागीतामा भ्रमण वर्षको उद्घाटन १३ पुष २०७६, आईतवार १७:१६
काठमाडौँ, १३ पौष । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन सचिवले ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’को उद्घाटनमा १० लाख मानिस उपपस्थित हुने दाबी गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव केदार बहादुर अधिकारीले त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगाशालामा जनवरी १ तारिखमा १० लाख मानिसको सहभागीतामा भ्रमण वर्षको उद्घाटन..
विप्लव समूहका १५ जना पक्राउ
काठमाडौँ, १३ पौष । प्रतिबन्धित नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहका १५ जना कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन् । काठमाडौँको प्रदर्शनीमार्गमा कार्यक्रम गर्नेर्दा १३ जना पुरुष र २ जना महिलालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । सरकार विरोधी कार्यक्रम गर्न थालेपछि उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको..
काठमाडौँ, १३ पौष । संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमा कुहिएको चामल फेला पारेको छ । समितिको अनुगमनमा कुहिएको ४८७ क्वीन्टल चामल भेटिएको हो । जापानले अनुदानमा दिएको टाइचिन चामलमा उपभोग्य मिति नै नलेखिएको पनि भेटिएको छ ।..
काठमाडौँबाट ३६७ जना बेवारिसे व्यक्तिको उद्वार
काठमाडौँ, १३ पौष । काठमाडौं महानगरपालिकाले ३६७ बेवारिसे मानिसको उद्धार गरेको छ । काठमाडौंलाई सडक मानवमुक्त बनाउने अभियान (मानवमुक्त महानगर) अन्तर्गत हालसम्म ३६७ जनाको उद्धार गरिएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । यीमध्ये २१५ जना घर फर्किएका छन् । बाँकी १५२ जनालाई..